KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish French Ga Georgian German Greek Guarani Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kazakh Kikongo Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Korean Latvian Lithuanian Luo Malagasy Norwegian Nzema Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Quechua (Bolivia) Romanian Russian Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swedish Tagalog Tahitian Thai Tigrinya Tsonga Tswana Turkish Twi Ukrainian Vietnamese Xhosa Yoruba Zulu
ASƐM A ƐDA SO: WUBETUMI DE WO WERƐ AHYƐ ƆSOM MU?
Fa no sɛ yare kɛse bi abɔ wo, na gye sɛ woayɛ oprehyɛn ansa na wo ho atɔ wo. Ɛba saa a, wo nkwa hyɛ dɔkota a ɔbɛyɛ oprehyɛn no nsa, enti ɛsɛ sɛ ɔyɛ obi a wubetumi agye no adi paa. Wunnye nni sɛ ɛsɛ sɛ wuhu sɛ onim adwuma ansa na woagye no adi?
Enti ɛho hia nso sɛ wohwehwɛ wo som mu yiye. Sɛ wowɔ ɔsom bi mu a, ɛkyerɛ sɛ wode wo gyidi nyinaa ahyɛ ɔsom no mu, na sɛ wubenya nkwa daakye mpo a, egyina ɔsom no so.
Yesu ama yɛn biribi a ebetumi aboa yɛn ama yɛahwehwɛ yɛn som mu. Ɔkae sɛ: “Dua biara aba na wɔde hu.” (Luka 6:44) Enti sɛ wofa ɔsom bi na wohwɛ sɛnea ɛte no a, aba bɛn na ɛsow? Ɔsom no mpanyimfo ka sika ho asɛm dodo anaa? Asɔremma no nso, wɔde nea Bible ka wɔ akokoakoko ne abrabɔ pa ho no yɛ adwuma anaa? Afei ma yemmisa sɛ, enti ɔsom bi wɔ hɔ a yebetumi de yɛn werɛ ahyɛ mu? Yɛsrɛ wo, kenkan ɛho nsɛm a edidi so no.
“Dua biara aba na wɔde hu.”—Luke 6:44